Vidin-tsolika 2015 : tsy misy fiantraikany ny fihenam-bidin’ny baril | NewsMada
Vidin-tsolika 2015 : tsy misy fiantraikany ny fihenam-bidin’ny baril
Araka ny tatitra navoakan’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola, nihena 1,3 % ny fanjifana solika amin’ny ankapobeny, ny taona 2015, raha ampitahana ny tamin’ny 2014. Anisan’ny lafo ny eto Madagasikara raha jerena ny salam-bidin’ny solika ho an’ny mpanjifa maneran-tany. Maherin’ny 1 dolara ny eto Madagasikara raha latsaka izany ny any amin’ireo firenena maro.
Tsy misy fiantraikany eto amintsika ny fihenam-bidin’ny baril eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, ankehitriny, manodidina ny 45 dolara. Ny volana febroary aloha nahitana fihenam-bidy voalohany : 120 Ar tamin’ny lasantsy, lasa 3.580 Ar ; latsaka 50 Ar kosa ny gazoala, lasa 2.950 Ar. Efa nampoizina ihany io fihenam-bidy io, noho ny vidin-tsolika tsy nitsaha-nihena eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, saingy volana maromaro aty aoriana vao nampiharina. 48 dolara ny baril tamin’ny fiandohan’ny taona 2015, raha maherin’ny 100 dolara izany ny taona 2014.
Nisasaka ny taona 2015, niakatra indray ny vidiny, lasa 3.150 Ar ny gazoala, nitombo 200 Ar ary ny lasantsy, 3.730 Ar, nitombo 150 Ar. Any amin’io gazoala be mpanjifa io indrindra no nampiakarina kokoa. Tao anatin’ny enim-bolana voalohany ( janoary-jona 2015), araka ny voalazan’ny OMH, niakatra 199.971 m3 ny fanjifana gazoala eto amintsika, nanantombo 4 % raha ampitahana ny tamin’ny enim-bolana voalohany ny taona 2014. Ny solika fandrehitra, izay be mpampiasa ihany koa, raha 2.310 Ar, lasa 2410 Ar tamin’io volana jona io ihany. Tsy dia nampoizina loatra io fampiakarana ny vidin-tsolika faramparan’ny volana jona io. Voalaza fa efa tafiditra amin’ny fampiharana ny tena vidin-tsolika io fotoana io.
Mameno ny banga
Tonga ny volana novambra, mba somary nahena 30 Ar ny lasantsy ary ny gazoala be mpampiasa, nampiakarina 20 Ar. Ry zareo tompony ihany no mahita mangirana amin’io kajy io. Ny faran’ny taona 2015 teo hatramin’izao, 3.700 Ar ny lasantsy, 3.170 Ar ny gazoala ary ny solika fandrehitra, 2.380 Ar. Voalaza fa mameno ny banga tamin’ny vidiny tany aloha ireo kaompania, raha mbola 120 dolara ny baril. Antony iray lehibe koa ny tahan’ny vola ariary latsaka ambany. Vidiana amin’ny dolara amerikanina ny solika avy any ivelany.